IKwazulu-Natali izilela owayenguNdunankulu uFrank Mdlalose | Scrolla Izindaba
IKwazulu-Natali izilela owayenguNdunankulu uFrank Mdlalose
Okhulumela i-ANC uPule Mabe, ekhuluma ngomufi uDkt uFrank Mdlalose, uthe: “Abantu base-KZN bazomkhumbula njengeqhawe elalwela ukuthula.”
Amazwi enduduzo angena ngobuningi bawo ngokushona kukaMdlalose, uNdunankulu wokuqala KwaZulu-Natali.
Obeyingqalabutho ye-IFP, obeneminyaka engama-89, ushone ngoMgqibelo ngenxa yokugula okuhlobene ne-Covid-19.
UMabe uthe uMdlalose uzokhunjulwa ngemizamo yakhe engapheli ekulweleni nokuletha ukuthula phakathi kwe-IFP ne-ANC ngeminyaka yama-1980.
“I-ANC idlulisa amazwi enduduzo emndenini wakhe, abangani, i-IFP nakubantu base-KZN bonke,” kusho uMabe.
Ngowezi-1998, uMdlalose waqokwa njengenxusa laseNingizimu Afrika eGibhithe.
Ngemuva kokusebenzela i-IFP iminyaka engamashumi amathathu, ngowezi-2005, uMdlalose wamangaza abaningi ngesikhathi ejoyina iqembu eliphikisayo i-DA.
Umholi we-DA osanda kukhethwa e-KZN, uFrancois Rodgers uhalalisele uMdlalose njengomholi obesebenze kahle nawo wonke amaqembu ezepolitiki ngesikhathi esasenguNdunankulu.
“Ufake i-DA kwikhabhinethi yakhe yesifundazwe esikhundleni sikaSihlalo wezeMfundo. UDkt uMdlalose usisebenzele kahle isifundazwe kanye nezwe lakhe ngesikhathi esaphethe kanti ukushona kwakhe kuwukulahlekelwa okukhulu,” kusho uRodgers.
“I-DA ifisa ukululama okusheshayo kuMama Mdlalose okubikwa ukuthi usesibhedlela.”
I-IFP ithe uMdlalose, owayenguSihlalo wayo kuzwelonke, wayeyiqhawe kwezombusazwe.
Njengodokotela ngokomsebenzi, uMdlalose wathatha izintambo njengoNdunankulu ngowezi-1994 ngemuva kokuthi i-IFP inqobe isifundazwe sase-KZN, yize i-ANC yanqoba ukhetho lukazwelonke.
Imininingwane yomngcwabo isazomenyezelwa.